I-Minimalist Door Hardware Solutions - I-Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Njengoba i-80s kanye ne-90s iba abathengi abakhulu kanye nokuthandwa kwesitayela esincane kanye nendlu eyenziwe ngokwezifiso, imboni yeminyango kanye nemboni yephrofayili ye-aluminium ithuthukise iminyango emincane (okuhlanganisa iminyango engabonakali kanye neminyango yophahla oluphezulu) ukuze kuhlangatshezwane nesidingo semakethe.
Iminyango ye-Minimalist ayikwazi nje ukwandisa isikhala ngokubukeka, kodwa futhi ihlanganise nesikhala sonke ukuze kugcinwe ubunye besikhala.Ngakho-ke, i-YALIS ithuthukise izingidi zezibambo zeminyango ezisekelwe kulezi zici zeminyango emincane.
I-MULTIPLICITY Series Izibambo zezicabha
Ukuze kuhlanganiswe isibambo somnyango nomnyango, i-YALIS yethula uchungechunge lwe-MULTIPLICITY ngo-2020, ikakhulukazi iminyango ye-minimalist ephezulu, nesitayela sayo esincane, ukuze kuzuzwe umphumela ohambisanayo.
1. Ukufakwa kwesibambo somnyango kungasetshenziswa ebusweni beminyango, ukuze kube inhlanganisela ephelele nomnyango.
2. Isibambo senziwe ngephrofayili ye-aluminium, engaphathwa ngokuphela okufanayo nohlaka lwe-aluminium lomnyango we-minimalist.
3. Isakhiwo sokuvula ilungelo lobunikazi bokulwa nodlame senza isibambo somnyango singabi lula ukulenga phansi futhi sandise impilo yaso yesevisi.
4. Ibhawodi limbozwe ngomkhono wenayiloni ukuvimbela imihuzuko.
5. Ikesi lesiteleka elilungisekayo linganciphisa ubunzima bokufaka futhi lithuthukise ukusebenza kahle kokufaka.
Ihlose izici zeminyango emincane, i-YALIS iphinde yathuthukisa izibambo zeminyango ye-RAINBOW.Njengo-MULTIPLICITY, I-RAINBOW iphinde ihambisane nomqondo wokuhlanganisa izingidi zezibambo zeminyango neminyango ukuze kugcinwe ubunye besikhala.
3. Ibanga eliphakathi nendawo yokukhiya i-latch liyashintshwa lisuka ku-40mm liye ku-45mm, futhi imbobo yokuphotha yesibambo somnyango isebenzisa idizayini ephakathi nendawo ukuze ivimbele isandla ekuthinteni isibambo lapho siphendula ifindo.
4. Isakhiwo sentwasahlobo sendlela eyodwa sivimbela ngempumelelo isibambo somnyango ukuthi singalengi phansi.
5. Ububanzi besibambo somnyango buyi-40mm, okuhambisana kakhulu nobukhulu besandla somuntu futhi kuthuthukisa ukuzwa.
Izinsika Zeminyango Efihliwe
Ihinge yomnyango efihliwe inomsebenzi we-hinge wendabuko ngaphandle kokucekela phansi ubuhle beminyango emincane.Ngochungechunge lwe-YALIS MULTIPLICITY nochungechunge lwe-RAINBOW, bangakhulisa ubuhle beminyango emincane.